alaska WIC | JPMA, Inc
ကျွန်ုပ်တို့၏ WIC ပရိုဂရမ်သည် eWIC ဟုခေါ်သောအီလက်ထရောနစ်အကျိုးခံစားခွင့်လွှဲပြောင်းခြင်း (EBT) ကဒ်သို့ပြောင်းနေသည်။ eWIC ကဒ်အသစ်သည် debit ကဒ်တစ်ခုနှင့်တူပြီးသင့်မိသားစု WIC အကျိုးခံစားခွင့်အားလုံးကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရနိုင်သည်။
မြန်တယ် - ကုန်ပစ္စည်းမှာအချိန်ချွေတာ!
ဒါဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် - သင်၏ WIC အစားအစာများကိုတစ်ပြိုင်တည်းဝယ်ယူပါ။
ဒါဟာရိုးရှင်းပါတယ် - စက္ကူစစ်ဆေးမှုများမလိုပါ။
eWIC သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးအပြီးသတ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကဒ်ကိုမရရှိပါကမကြာမီလာမည်။
အဆိုပါ eWIC ဗီဒီယို Watch
အောက်ကဗွီဒီယိုကိုသင်သည်သင်၏ eWIC ကဒ်နှင့်မည်သို့သင့်ရဲ့ WIC အစားအစာများအဘို့အစျေးဝယ်ဖို့အသုံးပြုလက်ခံရရှိသည့်အခါမျှော်လင့်ထားအဘယ်သို့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
(844) 386-3149 တောင်းဆိုသို့မဟုတ် ebtEDGE.com မှာ (ebtEDGE ကိုခေါ်) ကိုပေါ်တယ်အွန်လိုင်းမယ့်တစ်ဦး PIN ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါကတ်ကိုင်ဆောင်သူရဲ့မွေးသက္ကရာဇ်နှင့် PIN ကိုတင်ထားရန်ရှိနိုင်ပါအိမ်ထောင်စုမေးလ်ဇစ်ကုဒ်ရှိသည်။
အဆိုပါဆေးခန်းဝန်ထမ်းသင်တို့အဘို့ဤအမှုကိုလို့မရပါဘူး။ သင်၏ PIN ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
တစ်မိသားစုဘယ်နှစ်ယောက် eWIC ကတ်များများနိုင်သလဲ
"အိမ်သူအိမ်သား" တစ်ဦးလျှင်တစ်ဦးက သို့သျောလညျးသငျမျိုးစုံကတ်များနှင့်အတူစျေးဝယ်မည်အကြောင်း (ဥပမာသငျသညျ WIC အပေါ်မျိုးစုံကလေးများနှင့်အတူတစ်ဦးမွေးစားမိဘ) မျိုးစုံ "အိမ်ထောင်စု" အတွက်စျေးဝယ်မယ်ဆိုရင်။
သင်ကဒ်ယာယီရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြယုံကြည်လျှင်သင်အကူအညီအတွက်သင့်ဒေသခံ WIC ဆေးခန်းကိုခေါ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ကဒ်ပေါ်တွင် "တစ်ကိုင်ထား" ကိုမေးကြည့်ပါ။
ဒါကြောင့်အခိုးခံရသို့မဟုတ်ကျိန်းသေရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အကယ်. ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်တစ်ဦးကဒ်ပယ်ဖျက်ပြီးပြန်စီနိုင်ပါတယ် (844) 386-3149 သို့မဟုတ် (ebtEDGE ကိုခေါ်) ကိုပေါ်တယ်မှာအွန်လိုင်းမယ် wic.alaska.gov။ ထို့အပြင်သင်ပယ်ဖျက်ဖို့သင့်ဒေသခံဆေးခန်းကိုခေါ်အသစ်တစ်ခုကဒ်ကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဒီသင်ပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်ဒုတိယပျောက်ဆုံး / ခိုးယူကဒ်သည်ဆိုပါကတစ်ကဒ်အသစ်လက်ခံရရှိရန်သင့်ဒေသခံဆေးခန်းကိုခေါ်ပါ။
အဆိုပါ 3rd ကဒ်တစ်နှစ်အတွင်း / ပျောက်ဆုံးသွားအခိုးခံရလျှင်, သင်ကတ်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အသုံးပြု. အသစ်တစ်ခုကိုတဦးတည်းပြန်စီလိမ့်မယ် (844) 386-3149, ဒါမှမဟုတ်အွန်လိုင်း go ebtEDGE.com။ သူတို့ပြည်နယ်ထဲကတင်ပို့နေကြသည်အဖြစ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်းမှတဆင့်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းအမိန့်ကတ်များကိုသင်ရောက်ရန်ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာယူစေခြင်းငှါသတိပြုမိလိမ့်ပေးပါ။
WICShopper မှ“ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးကျေးဇူးများ” အင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပါ။
စတိုးဆိုင်မှာသငျသညျမှာ "ချိန်ခွင်လျှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်" ကိုတောင်းခံသို့မဟုတ်သင့်နောက်ဆုံးလက်ခံရရှိပြန်လည်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။
သင့်အိမ်ထောင်စုရဲ့ကျန်ရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ဖို့ ebtEDGE.com ဖို့ပေါ်တယ်ကိုသုံးပါ။
မှာဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလိုင်း Call (844) 386-3149.
ဟုတ်ကဲ့! ကဒ်ထုတ်ပေးနှင့်မူလတန်းကတ်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်သူလူတစ်ဦး, ကဒ်၏တာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ Y ကou ရိုးရှင်းစွာသူတို့ကိုကဒ်ပြုလုပ်သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုပေါ် PIN နံပါတ်နဲ့ညွှန်ကြားချက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုဝယ်ခြင်းငှါပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့အဘို့အစျေးဝယ်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးလိမ့်မည်။ သငျသညျဤအချက်အလက်သည်လာသောအခါသင်သည်သူတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အသုံးပြုသောလျှင်စားနပ်ရိက္ခာအကြိုးကြေးဇူးမြားကိုအစားထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
စတိုးဆိုင်လက်မှတ်ပေါင်းသို့မဟုတ် ID ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်နည်း
အမှတ်သာစျေးဝယ်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဒ်နှင့် PIN ကိုလိုအပ်ပါတယ်။
ဘယ်မှာငါ eWIC နှင့်အတူစျေးဝယ်နိုင်သလဲ
WICShopper ရှိ“ WIC Stores” အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ်ထိုဒေသရှိ WIC စတိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်သင်၏ WIC ဆေးခန်းကိုခေါ်ပါ။
သင်၌လာရန်လိုအပ်မည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဒေသခံဆေးခန်း Call, သို့မဟုတ်သင့်ကဒ်နှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုအဝေးမှထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်လျှင်။ သင်ဆဲအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, အရပ်, အလေးချိန်, အသွေးအလုပျအတှကျဆေးခန်းကိုသွားဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
ငါထင်လျှင်တစ်ဦးအစာအာဟာရကို item ငါ WIC မှသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ကြဘူးဘယ်လို, ငါ့ eWIC ကဒ်အားဖြင့်ပေးဆောင်ခြင်းနှင့်မဖြစ်သင့်သနည်း
ယင်းကိုသုံးပါ "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!WICS! နှင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်များကို WIC သို့တင်ပြရန် WICShopper မှ“ feature ။
သင်တို့သည်လည်းမှာကြှနျုပျတို့၏ website ကိုသွားစေခြင်းငှါ wic.alaska.gov ထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အစားအစာများတင်သွင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါ။
အစားအစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့၏ 30 ရက်အတွင်းလက်ခံခဲ့သည်သို့မဟုတ်ပယ်ချဖြစ်စေနေကြသည်။ အသစ်အတည်ပြုအစားအစာများ Alaska WIC ဘို့အတည်ပြုခဲ့ကြသောသူအပေါင်းတို့သည်အစားအစာတစ်ခု Excel spreadsheet သော Approved စားနပ်ရိက္ခာစာရင်း (APL), တွင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
စစ်ဆေးမှုများနှင့်အတူ WIC ပစ္စည်းများကိုထုတ်ကွဲကွာပြီးသီးခြားငွေပေးငွေယူအဖြစ် run ခံရဖို့ခဲ့ပုံကို eWIC အလုပ်လုပ်ကြမည်နည်း
သူတို့သည်သင့်ကိုလမ်းပြနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သင်သည် WIC သုံးပြီးပါလိမ့်မည်သိပါစေ။ တချို့ကစတိုးဆိုင်များသင်ငွေပေးငွေယူဘို့အတူတူအရာအားလုံးကိုထားရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအခြားသူများထံမှ WIC အစားအစာများကိုခွဲခြားရန်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်မှာ FIRST run, ကျန်ရှိနေသေးသောအစားအသောက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ SNAP, TANF, ဒက်ဘစ် / အကြွေး, ဒါမှမဟုတ်ငွေသားအဖြစ်) အခြားပေးချေမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်။ ကြိုတင်ငွေသွင်းငွေထုတ်လက်ခံမှ WIC ဖို့ "တရားစွဲဆို" ခံရသည့်အစားအစာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့သေချာပါစေ။
WICShopper အတွက် scanning ထုတ်ကုန်
Q: အစားအစာအချို့ကိုသော့ကြည့်ပြီး UPC နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးမတူညီသောစာတိုများကိုကြည့်သည်။ သူတို့ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ
ခွင့် - ဤပစ္စည်းများကို Alaska WIC အဘို့အခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ဤအကြောင်းအရာအားဝယ်ယူရန်အတွက် WIC အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိသည်!
NO ရထိုက်ခွင့်အကျိုးကျေးဇူးရလဒ်ရယူ - ၎င်းသည် WIC သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကို ၀ ယ်ယူရန်သင့်တွင်ရရှိနိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများမရှိပါ။ သင်ဤပစ္စည်းအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်များမပေးအပ်ထားပါက၊ သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူရန်ကျန်ရှိနေသေးသောအကျိုးခံစားခွင့်များမရှိခဲ့ပါ။
မတစ်ဦးက WIC ITEM ခု - ဤ WIC ဤအကြောင်းအရာအားအတည်ပြုခြင်းမရှိသေးပေဆိုလိုသည်။ သင် WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုအကို အသုံးပြု. အသိပေးနှင့်အတူဤအစာကိုဝယ်နိုင်ဖြစ်သင့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် "ငါသည်ဤမဝယ်နိုင်!" ဒီ app ထဲမှာတည်ရှိပါတယ် [HC (3] ။
သိရှိနိုင်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး - ဆိုလိုသည်မှာဤပစ္စည်းသည်အစားအစာစာရင်းတွင်မရှိသော်လည်းနောက်ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းထည့်သွင်းခြင်းရှိမရှိကို WICShopper အိမ်ရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်သွယ်၍ မရပါ။ အများစုမှာဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည် WIC သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းမဟုတ်ပါ။
A: များစွာသောကိစ္စများတွင် WICShopper သည်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး။ မရပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်စတိုးဆိုင်များသည်၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်ထုပ်ပိုးခြင်းကို အသုံးပြု၍ အတည်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါ။ သို့သော် အားလုံးတပြင်လုံးကို, Pre-ဖြတ်, ကိုခွဲသို့မဟုတ်ဝက်အူချောင်းသို့မဟုတ် dips မပါဘဲတစ်ဦးချင်းအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အရွယ်အစားခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ အချို့ရှိကတခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အသေးစိတ်များအတွက် app ထဲမှာသင့်ရဲ့အစားအသောက်စာရင်းကိုကိုးကားပါ။
alaska WIC အစားအသောက်စာရင်း Approved